नयाँ दैनिक | अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय – Page2– नयाँ दैनिक
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा आम चुनावको घोषणा
चैत २८, काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्टक मेरिसनले यसैवर्षको मे १८मा आम चुनावको घोषणा गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री मोरिसनले निर्वाचन घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचनले आउँदो दशकको अर्थतन्त्रबारे निर्धारण गर्ने बताएका छन् ...
महंगो सम्बन्धविच्छेद गर्दै एमेजनका मालिक
चैत २२, काठमाडौँ । एमेजनका मालिक जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मक्केन्जीले सम्बन्धविच्छेदको गर्ने भएका छन् । २५ बर्ष अघि उनिहरु वैवाहिक बन्धनमा बाधिँएका थिए । संसारकै धनी व्यक्ति भनेर चिनिएका जेफ र उनकी पत्नीका बिचमा सम्बन्धविच्छेद हुँदा मक्केन्जिले ३५ बिलियन अमेरिकि डलर अर्थात ३८ खर्ब बराबर नेपाली रुपैँया प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ...
तालिवानको आक्रमणबाट ८ प्रहरीको मृत्यु
चैत १९, काठमाडौँ । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बाल्खमा रहेको एक प्रहरी शिविरमा गएराति भएको आक्रमणमा ८ जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ । तालिबान लडाकू समूहले गरेको यस आक्रमणमा परी अन्य ६ जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरी स्रोतले मङ्गलबार जनाएको छ । यस समाचारको विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
अफगानिस्तानमा सन् २०१४ को अन्...
अमेरिकाले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन कति छुट्यायो बजेट ?
चैत १३, काठमाडौँ । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एक अर्व डलर निकासा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको प्रचारकै क्रममा पर्खालको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सीमामा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरेर प्रतिरक्षा शीर्षकमा छुट्याएको बजेटबाट पर्खाल निर्माण गर्...
भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिको निर्देशन : अमेरिकासँग उच्च सतर्क रहनू !
राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले सहायता सामाग्रीहरुलाई भेनेजुयला हस्तक्षेपको अमेरिकी बाहनाको आरोप लगाएका छन् । ग्वाइडोले फेब्रुअरी २३ को दिन लगभग ६ लाख भेनेजुयाली स्वयमसेवकहरुले सहयातालाई सिमाना पार गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी सैन्य जहाजहरुले भेनेजुयलासँग सिमा जोडिएको कोलम्बियाली सहर कुकुटामा मानवीय सहायता सामाग्री पुर्याई रहेका छन् । सहायता ...
अमेरिकालाई जवाफ : नयाँ मिसाइल बनाउने रुसी राष्ट्रपतिको घोषणा
माघ २३, काठमाडौँ । रुसले नयाँ मिसाइल प्रणाली बनाउन थालेको छ । शीतयुद्धको क्रममा भएको मध्यमदूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी एक सन्धि आईएनएफबाट अलग भएको घोषणा गरेको रुसले आफैँले मिसाइल बनाउन सुरु गरेको हो ।
रुसका रक्षामन्त्री सर्गेइ शोयगूले मंगलबार भनेका छन्, ‘दुई वर्षमा रुसले जमिनबाट मार हान्ने नयाँ मिसाइल बनाउने लक्ष्य रा...
सहयोग अस्वीकार गर्दै भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिले भने, ‘हामी भिकारी होइनौँ’
माघ २२, काठमाडौँ । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माधुरोले युरोपीय संघको सहयोग अस्वीकार गरेका छन् । भेनेजुयला मानवीय सहयोगको झूठो आश्वासनमा नफस्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘भेनेजुयला काम गर्छ, उत्पादन गर्छ र आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउँछ । भेनेजुयलाका जनता भिखारी होइनन् ।’
राष्ट्रपति माधुरोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोन...
भेनेजुएलामा संकट, प्रचण्डले के भने ?
माघ ११, काठमाडौँ । कम्युनिस्ट नेता ह्युगो चाभेजको मुलुक भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट व्याप्त भएको छ । ३५ वर्षीय हुवान गुएइदोले राजधानी काराकासमा आफूलाई भेनेजुएलाको ‘निमित्त नेता’ घोषणा गरेलगत्तै संकट बढेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका नेता गुएइदोलाई आफूले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा मान्यता दिने बताएका छ...
कंगोमा साम्प्रदायिक दंगा, ८९० को मृत्यु
माघ ३, काठमाडौं । कंगोमा भड्किएको साम्प्रदायिक दंगामा परी ८ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । कंगोको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने चार गाउँमा उनीहरु मारिएका हुन् । गत डिसेम्बरको तीन दिनमा आपसी झडपमा परी उनीहरुको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ३ दिनको अवध...
विश्वकै धनी जेफले बिहेको २५ वर्षपछि ‘डिभोर्स’ गर्दै
वाशिंगटन (एजेन्सी)। विश्वकै धनी एमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी जेफ बेजोसले उनकी पत्नी मक्केन्जीलाई २५ वर्षको वैवाहिक जीवनपछि डिभोर्स गर्ने भएका छन् । ती दुई जनाले गतहप्ता ट्विटरमार्फत् एउटा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आफूहरूले सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। “लामो समयसम्म प्रेमपूर्वक रहने र केही समय टाढा बस...